Ọ bụla Apple ọrụ na-adịghị arụ ọrụ? Anyị na-egosi gị otu esi elele ọnọdụ ya | Esi m mac
Ọ bụla Apple ọrụ na-adịghị arụ ọrụ? Anyị na-egosi gị otu esi elele ọnọdụ ya
Taa, Ndabere nke ngwa a bụ otu n'ime njirimara ndị ọrụ kacha jiri kpọrọ ihe. Apple na-ewetara anyị ọtụtụ ngwa ma ọ bụ ọrụ na gburugburu ebe obibi ya. Site na ngwa ma ọ bụ ụlọ ahịa egwu, ịmekọrịta foto, ma ọ bụ kọntaktị na ihe omume. Imirikiti n'ime ha chọrọ ịrụ ọrụ kwesịrị ekwesị nke sava Apple. Nke a bụ ọrụ dị n'ime Apple, nke mere na ndị ọrụ Apple nwere afọ ojuju zuru oke. Ma Kedu ka esi achọpụta ma nsogbu a sitere na Apple ka ọ bụ sọftụwia ma ọ bụ akụrụngwa anyị?
Ọ dị mfe ịlele ọnọdụ nke ọrụ ndị a, mana anyị ga-ama ebe ọ dị. Ọ bụrụ na ịnweta ihe ndị a njikọ, ị ga-enwe ike elele na nke steeti ndị Apple ọrụ bụ n'oge a. Agbanyeghi na m si na Mac, anyị ga-enwe ihu akwụkwọ a ka ị nwee ike ịkpọtụrụ ọrụ ndị a, ọ bụrụ n'ịchọrọ ị nweta nke gị, ugbu a anyị na-agwa gị otu esi.
Imirikiti bụ ọrụ ndị dabere na akaụntụ iCloud, nke bụ ya mere peeji ọkwa sistemụ dị na ihu peeji nke ibe ahụ. Ọ bụrụ na ịmaghị ya, peeji ahụ bụ www.icloud.com
Na ala, anyị na-ahụ njikọ nke Ọnọdụ Sistem. Pịa ma ị ga-enweta ya.
Ọrụ nke ọrụ ahụ dị mfe. Keabiidii iji niile ọrụ. Taa enwere ọrụ 52. Ndị a sitere na ọrụ nke ụlọ ahịa Apple maka ibudata ngwa, egwu na ọdịnaya ndị ọzọ, site na ngwa dịka Maps, Apple Pay na-ejedebe na ọrụ igwe ojii nke Apple: kọntaktị, kalenda, akwụkwọ iCloud.
Yabụ, ọ bụrụ n'ịhụ na ọrụ ahụ bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, n'ụkpụrụ Apple ọrụ na-arụ ọrụ zuru oke. Ọtụtụ oge, site na ịgbanye akụrụngwa ma gbanye ya, ị ga-edozi nsogbu gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Ọ bụla Apple ọrụ na-adịghị arụ ọrụ? Anyị na-egosi gị otu esi elele ọnọdụ ya
Mepụta mpempe akwụkwọ ọsọ ọsọ na ndebiri ndị ọrụ a
Tọghata videos na gifs na Video GIF Onye Okike